सिद्धान्तलाई अवमूल्यन नगरौँ - Nepal Samaj
८ मङि्सर, २०७८नेपाल समाजमुख्य समाचार, राजनीति, विचार
उपरोक्त असङ्गतिले गर्दा संसद, पार्टी, सरकार र राजनीतिले एकपछि अर्को धक्का खाँदै गयो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास वा समाजवादको बुझाई व्यक्तिपिच्छे फरक भए । गएको ८/९ वर्ष पार्टीको नीति–कार्यक्रममाथि कुनै प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना भएन । विचार/सिद्धान्त वा माक्र्सवाद वा जनताको बहुदलीय जनवादमााथि कुनै गतिलो चर्चासमेत भएन । दलाल पुँजी वा राष्ट्रिय पुँजी के हो ? दलाल पुँजीसँग को लड्छ ? कसरी लडिन्छ ? समाजवादको तयारी भनेको के हो ? त्यसका लागि कसले के गर्नु पर्र्ने हो ? सिद्धान्त निर्माण गर्ने विधि के हो ? सिद्धान्त कसले बनाउँछ ? कसरी बनाउँछ ? जस्ता प्रश्न नै उठ्न छोडे । त्यसले पार्टी पङ्तिले के ठिक वा के गलत हो भनेर विश्लेषण सकेन । अराजकता र गुटबन्दी बढ्दै गयो । नेताहरुका स्वार्थको छद्म युुद्धमा पार्टी फस्यो । त्यहि छद्म युुद्धमा संसद विघटन, पार्टी विभाजन, सरकारहरुको विघटन हुँदै गयो । किटानीका साथ के भन्न सकिन्छ भने यदि यी कमजोरीलार्ई नसुधार्ने हो भने गल्ती दोहरिँदै जानेछन् र समयले हामीसँग चर्को ब्याजका साथ सिद्धान्तमा खेलबाडको मूल्य चुक्ता गर्नेछ ।